Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း)
Dr. Sandy Kyaw မှ ရေးသားသည်။ 13/09/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ရိုးရိုးမွေးဖွားပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ခွဲပြီးမွေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် နို့တိုက်နေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပိုးဝင်ခြင်းမျိုးကိုမဆို ကလေးမွေးပြီးချိန်မိခင်တွင်ပိုးဝင်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကလေးရိုးရိုးမွေးရချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် ခွဲမွေးချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် ဒဏ်ရာရထားတာမျိုးရှိရင် နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲ မှုကြောင့် ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်းဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ မိခင်တွေက နာကျင်မှုတွေခံစားရတတ်တာကြောင့် ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်နာတာလား ဒါမှမဟုတ် ကလေးမွေးပြီးနောက်နာကျင်ခြင်းလားဆိုတာ ရှာဖွေဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ပိုးဝင်ခြင်းတွေကတော့
Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကတော့ ၉၄ရာခိုင်နှုန်းသော ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုးဝင်ခြင်းက ဆေးရုံကဆင်းပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှ တွေ့ရတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ပိုးဝင်ခြင်း က သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အချိန်မျိုး ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ ပိုမိုဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲ့ဒါတွေကို အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့အချက်တွေကို လျှော့ချစေခြင်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လူနာက ဖျားတယ် ချမ်းတုန်တယ် နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးဆိုတာတွေဖော်ပြလာရင် အဲ့ဒါတွေကပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေ ကတော့
-နာကျင်ယောင်ယမ်း နီရဲတဲ့ နေရာ (များသောအားဖြင့် ရင်သားတစ်ဖက်ဖက်တွင်) ပြီးတော့ ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ကြွက်သားများကိုက်ခဲခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း (ရင်သားယောင်ရမ်းခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ)
-ခွဲထားတဲ့နေရာကနေ ဒါမှမဟုတ် အနာဖြစ်ခြင်း (ခွဲထားတဲ့ဗိုက်က အနာမှ၊ မွေးလမ်းကြောင်းမှ အနာ ဒါမှမဟုတ် စုတ်ပြဲ ဒဏ်ရာ မျုး)နီရဲခြင်း၊ အရည်ထွက်ခြင်း၊ ယောင်ရမ်းခြင်း၊ ပူနေခြင်း များ ခွဲထားတဲ့ဓါးဒဏ်ရာက ကွဲထွက်တော့မလိုတွေမြင်ရရင်
-ဆီးသွားရခက်ခဲခြင်း၊ ဆီးသွားချိန်နာကျင်ခြင်း၊မကြာခဏဆီးသွားချင်တာမျိုး ဆီးမထိန်းနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်သွားတဲ့အချိန် ဆီးမထွက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် နောက်ကျိကျိအရောင်သွားခြင်း နှင့်သွေးပါခြင်း (ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာများ)
ကလေးမွေးပြီးတဲ့ လူနာတွေကို မွေးပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်ဆိုရင်ကို ဆေးရုံကနေပေးဆင်းပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ချိန်က တိုတောင်းတဲ့အတွက် ဆေးရုံကနေမဆင်းခင်မှာ ပိုးဝင်ခြင်းရှိမရှိကို သက်သေရှာဖို့ မတွေ့နိုင်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ စောစီးစွာ ရောဂါရှာခြင်းနဲ့ ကုသမှုပေးခြင်းက ကလေးမွေးဖွားပြီးချိန်ပိုးဝင်ခြင်းကနေ အခြား ကျန်းမာရေး ပြသနာတွေရယ် ပိုဆိုးမလာအောင်ရယ် ရပ်တန့်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက် ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေထပ်ဖြစ်မလာနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှအစောဆုံးဆွေးနွေးပါ။
Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပိုးသေဆေးတွေ ပန်နီစလင်တွေရှိလာတာကြောင့် ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုးဝင်ခြင်းကို သိပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ သို့
သော်လည်း အရေပြားမှာနေတဲ့ အကောင်တွေဖြစ်တဲ့ Streptococcus ,Staphylococcus လို့ခေါ်တဲ့အကောင်တွေရယ် တစ်ခြား ပိုးမွှားတွေဟာ ပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။၎င်းပိုးကောင်တွေဟာနွေးထွေးစိုစွတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်ကြီးထွားကြပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုးဝင်ခြင်းဟာ ကလေးမွေးပြီးနောက် သားအိမ်ထဲမှာ စတင်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
သားအိမ်ဟာ ကလေးနေတဲ့ အရည်အိတ်မှာ ပိုးကူးစက်မှုခံရရင် သားအိမ်လည်း ပိုးဝင်ခြင်းခံရပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သင်ကလေးမွေးဖွားတဲ့ နည်းလမ်းပေါ်မူတည်ပြီးရယ် သင်မွေးဖွား
ပြီးတဲ့နောက် ပိုးဝင်ခြင်းပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်။
-၅-၁၅ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကလေးမွေးဖို့ရက်သေချာကြိုရွေးပြီး ခွဲမွေးတဲ့အချိန်မှာရပါတယ်။
-၁၅-၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ဗိုက်နာပြီးမှ ရက်သေချာမရွေးထားတဲ့ ခွဲမွေးမှုမျိုးမှာ ရတတ်ပါတယ်။
ပိုးဝင်ခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်စေတဲ့ အခြား အချက်အလက်တွေ လည်းရှိပါသေးတယ်။၎င်းတို့ကတော့
-ကလေးမွေးဖွားချိန်မှာ မိန်းမကိုယ်တွင်း ခဏခဏ နှိုက်စမ်းထားခြင်း
-ရေမွှာအိတ်ပေါက်တာနဲ့ မွေးဖွားချိန်ကြားကာလ ကြာရှည်ခြင်း
-Group B streptococcus ပိုးကောင် မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းမှာ
-ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက် အချင်းမှ အပိုင်းအစများကျန်နေခြင်း
Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ခန္ဓါကိုယ်ကို သေချာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခံခြင်းနဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ပိုးဝင်ခြင်းကို သင့်ဆရာဝန်က ရောဂါရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန်မှ ပိုးရှိမရှိ ဆီးစစ် သွေးစစ်ခြင်းများ လုပ်ခြင်း သင့်သားအိမ်ကနေ ဂွမ်းစလေးနဲ့ အသာထိပြီး ပိုးကောင်မွေးခြင်းများကို ပြ ုလုပ်ခြင်းနဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ပိုးဝင်ခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
Postpartum Infection (ကလေးမွေးပြီးနောက် မိခင်တွင်ပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပိုးဝင်ခြင်းကို မကုသပဲထားပါက ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ် သင့်မှာ ဖျားနာခြင်းဖြစ်ရင် ဒါမှမဟုတ် အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိမယ် ခံစားရမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံးတတ်နိုင်သမျှ အသိပေးပါ။ သင့်ပိုးဝင်ခြင်းကို ကုသဖို့ ပိုးသတ်ဆေး ပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင်က နို့တိုက်နေရင် နို့်တိုက်နေကြောင်းဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ အဲ့ဒါမှ ဘယ်လိုသောက်ဆေးကို ပေးရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရမှာပါ။ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ဆေးတွေနဲ့အများအားဖြင့် လုံလောက်တတ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေအရမ်းအခြေအနေဆိုးတဲ့အခါ ပိုးသတ်ဆေးကို အကြောထဲထိုးရတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ တစ်ခြား ကုသမှုခံယူရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ သင့်ဆီမှာ ပိုးဝင်တဲ့အနာရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အနာကို ခွဲစိတ်လိုက်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပြီးမှ အပြင်ကို အရည်ထွက်စေတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
သင်ကပိုးသတ်ဆေး စသောက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သက်သာလာမှာပါ ဒါပေမယ့် သောက်ဆေးကို ကုန်တဲ့အထိ ရက်ပြည့်တဲ့အထိ သောက်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ို ဆေးတွေသောက်ပြီးဘယ်လောက်အကြာမှာ စအလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်ကိုမေးတာရယ် ဆရာဝန်ပြောတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ မသက်သာခဲ့ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်ကို သေချာပေါက်ပြောပြ အကြောင်းကြားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
သင့်မှာ ဆေးပြောင်းသောက်ဖို့ လိုနေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားတစ်ခုခု အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်မသက်သာနိုင်တာ
တွေဖြစ်နေနိုင်လို့ပါ။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းမဖြစ်စေဖို့ ရေများများသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ သင့်ခန္ဓါကိုယ်က ပိုးဝင်ခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ တိုက်နိုင်ဖို့ အနားယူနိုင်သမျှ ယူပေးပါ။
လူနေမှု ဘဝပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ။
ကလေးမွေးပြီးနောက် ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကို ကူညီနိုင်မယ့် လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကဘာတွေလဲ။
ကလေးမွေးပြီးနောက် ပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကတော့
-ခွဲစိတ်မယ့် မနက်ခင်မှာ ရေချိုးခြင်း
-ဓါးနဲ့ အမွေးရိတ်ခြင်းထက် အမွေးညှပ်နဲ့ ဆီးခုံမွေးတွေဖယ်ရှားခြင်း
-Chlorhexidine-alcohol ကိုအသုံးပြ ုပြီးအရေပြားကိုသန့်စင်ခြင်း
(တကယ်လို့ သင့်ဆီမှာမေးခွန်းတွေရှိသေးရင် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေရရှိနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါ။)
Postpartum infection.http://www.healthline.com/health/puerperal-infection.Accessed Mar 12, 2017.
Postpartum infection.https://en.wikipedia.org/wiki/Postpartum_infections.Accessed Mar 12, 2017.
Postpartum infection.http://emedicine.medscape.com/article/796892-overview#a4. Accessed Mar 12, 2017.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ သရက်သီး စား လို့ရလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ မင်းဂွတ်သီး စားလို့ရလား ......